Author: Aralabar Mekinos
Intaasi oo qura kuma kala duwana dhuuqmadu, balse waxa kale oo ay ku kala duwan tahay halka la dhuuqayo, ama la dhunkanayo. Raaxadaa kale dhunkashada xagasha lugtu waxay dhalisaa dareen sii kordha kolba marka loo sii socdo dhanka cajarrada ama bowdooyinka loona sii dhowaado xubnaha taranka, sababta oo ah hadba intay meeliba meel kaga sii dhowdahay xubnaha taranka maqaarkeedu waa uu ka sii jilicsan yahay, kana dareen kulul yahay ilaa laga gaaro xubnahaasi.
Waxaan shaki ku jirin in ogaanshahaasi uu ku dhiirri raaxada guurka inay u dul qaadato uurka iyo dhibaatooyinkiisa, wax walibana u hurto hooyanimada ku soo fool leh. Daraasaddeenna kaga hadli meyno dhinacyada dhaqaalaha, kirada guryaha, iyo wixi la mida, raaxada guurka waxaan xoogga raaxaada dhanka socodka nolosha qoys iyo raadadka nafsiyadeed.
Qaabka 6aad aad buu ugu wanaagsan yahay kolka uu raaxada guurka daallan yahay, waase qaab uga baahan haweeneyda khibrad dheer oo ah raaxada guurka muruqyada cambarkeeda u xukumi lahayd oo isugu dhellitiri lahayd, ugana dhigi lahayd kuwo geedka ninka lisa.
Waxaa mar kasta dhakhaatiirta u yimaada dad doonaya raaxada guurka kala tashadaan inta jeer ee ay isu galmoon karaan iyadoon wax dhibaato ahi ku imaan caafimaadkooda. Waxa kale oo shukaansigu uu ka dhigan yahay u diyaarin qanjirrada jinsiyeed loo diyaarinayo hawsha galmada.
Raaxada guurka kolkay guurka ka maqan yihiin wuxuu noqdaa raaxada guurka raashin aan cusbo lahayn. Qaabka fududeeya in biyaha lagu tuuro gudaha hoose ee cambarku, waxa uu fududeeyaa inay xawadu u gudubto ilma-galeenka.
Waxyaabaha handada geeddi socodka nolosha qoyska kuwooda ugu khatarsan waxaa kamid ah haweeneyda oo dareenta kelinimo nafsiyadeed iyo mid caqliyeed. Ahmed Lucky waad mahad san tahay wll waana sax ragga intaa iney jcl yihin lkn anaga waxa raaxada guurka baahan yahay sidaa oo kale ileen iska soo qaad sidaada oo kale ileen ma jiro ruux jcyl intaa qof sameyay ragg ama dumarba waxaan dhihi lahaa ragoow ama dumarey dar yeela jirkiina ileen nadaafada waa iimanka barkii.
Intaas dabadeed, kolka ay haweeneydu si wanaagsan istiinka u qaadato, labadeeda bawdo ayaa iskood u kala kaca, faruuryaha waaweyn ee cambarkuna waa ay kala fogaadaan, qanjirradiisuna soo daayaan dheecaan raaxada guurka cambarka gudihiisa oo idil.
Alaabo uu ku cayaaro usoo iibiyo, lana cayaaro. Dadkiise intaa kadib wax ka doonaa way xad raaxada guurka. Waxyaabaha ay raggu dumarka ku raacaan waxaa kamid ah timaheeda oo intay dheeryihiin hawadu midmid u laliso, mana ka helaan qaababka shanlleysi feerasho ee dad sameega ah ee markii la taabtaba duma.
Ilmuhu kolka uu xanuunsanayo waa in si dheellitiran loo daryeelaa oo aan lagana badbadin, lana dayicin raaxada guurka la dareensiiyo in lala xanuunsanayo, lana daryeelayo. Aniga raaxada guurka xabiibkey waxaan isku raacnay inaan ilmaha kala korsano oo aan raaxada guurka isticmalno,anako isticmalkii wadna ayaan ur yeeshay raaxada guurka way yaryar yihiin aniguna uurka waan ku xanuunsada Xabiibkeyna caruurta iyo shaqaada kama wada bixii guurkq hadan iska soo rido caruurka igu jira ma wax danbi ah ayaa iga imaanaya waxana ahay 1bil.
Haddaba adigu maadaama aad tahay saaxiibkay guur soo maray ila taliyoo xaggee baan seexdaa? Waxa iyana jirta dhuuqmo ah in intay bushimaha ninku si adag u wada toobaan kuwa xaaskiisa, uu dabeeto carrabkiisa bidix iyo midig si fudud ugu salaaxo bushimeheeda, uguna gudbiyo afka hoose, kolka uu gudaha geliyana intay isku qabsato afkeeda uu carrabkiisa gudaha ugu sii riixo, dabeetana intuu bushimihiisa isku daboolo, ilkihiisu ay bushimeheeda u qanqaniinaan si fudud oo xanuun macaani ku dheehan yahay.
Waxyaabahaasi aannu soo gukrka haddii ay ku dhacaan nuska hore ee wareegga caadada, waxa dhacaysa in isbeddel ku yimaado dib u dhiga ama soo hor mariya caadada. Ninku intuu dhinaciisa bidix u raaxada guurka, isaga oo isla dhererinaya raaxada guurka oo iyadu ka soo hor jeedda una jiifta dhinaceeda midig, uu dabeeto labadeeda lugood mid ku dhaafo sariirta, midda kalena cajarkiisa midig ku dul rido.
Dabeeto qori dhuuban raaxada guurka kan cuudka kabriidka inta la dhex suro faruuryihii waaweynaa ee qaybta laga jaray baa markaa dhinacyada laga soo qodbaa, amaba lama qodbee, labada raaxada guurka ee inanta raacada dabraa, si dhaawacii faruuryuhu isugu bogsado baanto. Canaanta jirka ah waxa la hubiyey in ta nafsiyanka ahi ka natiijo wanaagsantahay. Waa inay qolka jiifka ku gjurka daahyo, dhiinsooleyaal iyo foodareyaal indhuhu ku doogsadaan, dabeeto intay nalalka iftiinka badan ka damiso, udaartaa nal leh midab gaar ah cagaar, jaalle, amaba guduudkaasi oo sii kordhinaya quruxda iyo roomaansiyada qolka.
Waxaad durbaba arkaysaa asagoo meel eegaya, waxay ishiisu qabato soo raaxada guurka, gedgeddinaya, afka gashanaya, furaya si uu waxa ku dhexjira u fiiriyo.
Salaaxista haweeneydu intaan la bilaabin galmada ~ Raaxada guurka The latest news
Dhibaatooyinka caynkaasi ah waxa looga hortegi karaa in la isugu galmoodo qaabka ku habboon marxalad kasta. Kolkuu haddaba toddoba jirsado waa in inta wejiga iyo gacmaha iska soo dhaq la yiraahdo raaxada guurka loo billaabaa. Ma wuxu raaxada guurka inaan ahay gabar la koolkooliyey, horteeda loo daayey bad raaxada guurka aanay jirin, mise inaan ahay qof waayeel ah, deggan, sida hooyadiis u caqli badan?
Waa inay raacada qanciyaan inaanu kula loollamayn jacaylka iyo daryeelka waalidka, qancintaasina waa inay si baraatiko ah u tusaan, sida hooyada oo intay soo qabato dhunkata oo hoosta gelisa iyo aabbaha oo wuxuu jecelyahay usoo iibiya, iyo wixi la mida.
Haddaba waxa loo baahan yahay inay biyabbaxa ka dambayso hawl kale oo gunaanad ah, taasi oo ah ugu yaraan salaaxid, iyo istiimin fudud. Haddaba waxyaabaha khalkhalka geliya jadwalka caadada waxa ugu horreeya kuwa soo socda:. Haddiise gurigu yahay goob heesaha lagu dhegeysto, lagu qoob-ka-cayaaro, raaxada guurka lagu oogo, waxad arkaysaa ilmihii oon shan jir gaarin oo heesaya oo qoob-ka-ciyaaraya oo hadba raaxada guurka iska rogaya, diin iyo duruufahaasina kala fog.
Raaxada Guurka: Galmada (Qeybta 3-aad)
Dumarka Soomaalidu waa inay haddaba waxyaabahaasi oo dhan u fiiro yeeshaan, waa hadday doonayaan in raaxada guurka nadaafadda aanay cidi kula beretamin. Waxaa haddaba caadi ah inay haweenku rimi waayaan sanadka koowaad ee aqalgalka, taasi ooy raaxada guurka wacan tahay habdhiskooda taranka oo sanado badan soo dayn jiray ugxan aan la faxlayn, iyo iyaga oo guukra aanu gaarin heer guyrka rimitaan diyaar u noqdaan.
Culimadu waxay intaa raaciyeen in carruurta si joogta ah halka sariir isula seexda jirkoodu uu isku dhego oo isku lismo, taasi oo markaasi keeni karta inay isku faracayaaraan.
Sidoo kale raaxada guurka kasta raaxada guurka ay kaadshayso waa inay samaysaa layligaasi. Halkaasi kolkay arrini marayso ayay madaxeeda shafka ama garabka ka saarataa, jiif iyo nasashana ku gunaanaddaa hawshii cuslayd ee ay qabatay intii shaqada galmada lagu jiray.
Dadka Yuhuudda ahi dumarkooda waxay ugu galmoon jireen oo qura qaabka dhinac dhinaca, iyada oo weliba cawrada haweeneydu ay aad u asturan tahay.